परमप्रभुको डर मान्नु | Nepali Christians
July 29, 2015 11:22 am by: Admin Category: Sermons A+ / A-
परमप्रभुको डर मान्नेहरु र उहाँको नाउँको मान गर्नेहरुका सम्झनाको पत्र मुठ्ठामा उहाँको उपस्थितिमा लेखियो ।”यहाँ परमप्रभुको डर मान्नेहरु अनि परमेश्वरको नामको मान गर्नेहरुको लागि सम्झनाको पत्र मुठठामा लेखिएको कुरा बताएका छन् । परमेश्वरको सम्झनाको पत्रमा नाम लेख्नु भनेको उहाँले विर्सनु हुन्न भन्ने कुरा हो । जव हामी परमेश्वरको डर मान्छौं, जब हामी उहाँको नामको मान गर्छौ, उहाँले सम्झनाको पुस्तकमा हाम्रो नाम लेख्नुहुन्छ । उहाँले धर्मीजनहरुको सम्झना गर्नुहुन्छ । उहाँले विर्सनु हुन्न । शायद तपाईंको मनमा कतिचोटी यस्तो लाग्न सक्दछ कि मलाई कसैले सम्झेन । मलाई कसैले हेरेन । मलाई कसैले याद गरेन । मेरो कामको कसैले वास्ता गरेन । जति काम गरे पनि कसैले वास्ता गरेन । अनि कति तपाईंको आफ्नै समस्याको कारण थकित हुनुभएको छ । मलाकी अगमबक्ताले भनीरहेका छन् कि परमेश्वरको एउटा पुस्तक छ, जसको नाम हो सम्झनाको पुस्तक अथवा पत्र । त्यो पुस्तकमा परमेश्वरको डर मान्ने, उहाँको नामको मान गर्ने हरेकको अभिलेख राखिनेछ । यो परमेश्वरको आप्mनै उपस्थितिमा गर्नुहुनेछ । कति अचम्म र खुशीको कुरा ! कति आनन्द र आशाको कुरा ! त्यसो भए हामी किन निराशा हुने ? किन वेखुशी हुने ? किन चिन्ता फिक्री गर्ने ? हामीले परमेश्वरको डर मान्नै पर्छ । उहाँको नामको मान गर्नै पर्छ । उहाँको नाम अति उच्च नाम हो । उहाँको नाम अति शक्तिशाली नाम हो । उहाँको नाम उदेकको नाम हो । उहाँको नाम पुकारा गर्नेहरुलाई उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ । उहाँको नामको मान गर्ने, आदर गर्नेहरुलाई उहाँले उहाँको सम्झनाको पुस्तकमा तिनीहरुको नाम लेख्नुहुन्छ । यो सम्झनाको पुस्तकचाहिं जीवनको पुस्तकसँग सम्बन्धित छ । जब कुनै मानिसको नाम जीवनको पुस्तकबाट हटाईन्छ भने उसको सम्झनाको पुस्तकबाट पनि हटाईनेछ ।
परमप्रभुको डर मान्नु Reviewed by Admin on Jul 29 . शायद तपाई जीवनमा एक्लो महसूस गर्नुभएको छ । प्रभुको डर भय मान्न पनि छोडनु भएको छ । प्रभुदेखि टाढो भएर तीतो जीवन बाँच्नु भएको छ । शायद मेरो मनको कुरा कसैले बुझन स शायद तपाई जीवनमा एक्लो महसूस गर्नुभएको छ । प्रभुको डर भय मान्न पनि छोडनु भएको छ । प्रभुदेखि टाढो भएर तीतो जीवन बाँच्नु भएको छ । शायद मेरो मनको कुरा कसैले बुझन स Rating: 0
नयाँ संविधानमा धर्मनरपेक्षता किन ?...संविधानमा अल्पसंख्यक...